Ryanair dia nilaza tamin'ny mpandeha mba handray bus rehefa avy niantsona teo amin'ny seranam-piaramanidina diso 480 kilaometatra
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ryanair dia nilaza tamin'ny mpandeha mba handray bus rehefa avy niantsona teo amin'ny seranam-piaramanidina diso 480 kilaometatra
Ireo mpitsangatsangana mitady an'i Britain ho an'ny masoandro ririnina dia navela teo amin'ny seranam-piaramanidina romanina iray andro teo ho eo taorian'ny 'navily lalana' ny sidin'izy ireo. Ireo mpandeha nanantena ny hisidinana haingana any Gresy dia nahita ny tenany tara 24 ora sy firenena telo tsy lavitra.
Ny sidina Ryanair nankany Tesalonika any Gresy dia nandao ny seranam-piaramanidina Stansted any Londres ny zoma hariva ho any amin'ny sidina tokony ho adiny telo. Na izany aza, ny toetr'andro ratsy tany Gresy dia nahatonga ny ekipa mpiasan'ny kabine hanodina ny sidina ary hanimba ny fanantenan'ny olona tao anaty sambo mba hisotro fisotro hariva na sakafo hariva any amin'ny tanàna avaratry ny Grika.
Raha tokony hampivily ny mpandeha 200 an'ny sidina hankany Athens na seranam-piaramanidina any Albania sy Makedonia mifanila aminy izy ireo dia nanidina nianavaratra kosa, niampita an'i Bulgaria nankany Timisoara, tanàna romana.
Nahemotra be sahady, romotra ny mpandeha rehefa nanolotra ny bus ho any Tesalonika ny zotram-pitaterana 770km mahery izay mety haharitra adiny valo vao vita.
Olona 89, fara fahakeliny, no nandà izany tolotra izany, fa tokony hijanona ao amin'ny seranam-piaramanidina mandritra ny alina. Niondrana an-tsambo fiaramanidina Aegean Airlines nokarakarain'ny governemanta grika izy ireo taty aoriana, tonga tany Tesalonika kelikely taorian'ny 5 hariva ny asabotsy, efa ho 24 ora tanteraka taorian'ny niaingany.
Nahatonga hatezerana tao amin'ny media sosialy ity tranga ity, ary maro ny mihevitra fa ny fanapahan-kevitr'i Ryanair hamily hatrany Timisoara dia fepetra fitehirizana vola, satria ny seranam-piaramanidina tetibola dia mampiasa ny seranam-piaramanidina ho toy ny fototry ny asa.
Niala tsiny tamin'ny fialantsasatra izay “tsy takatry ny sain'izy ireo”, hoy i Ryanair fa ny mpanjifa dia natolotra mpanazatra ho any amin'ny toerana alehany na afaka miandry sidina hafa azo alamina rehefa "tonga ara-dalàna ao Timisoara."
Tsy nisy herinandro akory ny tranga taorian'ny nifidianan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Iray ho mpiasan'ny fotoana fohy ratsy indrindra manompo seranam-piaramanidina UK, ary nahazo naoty 40% fotsiny ny fankatoavana avy amin'ireo olona 7,900 nanaovana fanadihadiana. Ity dia taona fahenina nisesy izay nahatratrarana kaompaniam-pitaterana ny laza mampidi-doza.
Ny nosy Indonezia Ternate dia nitatitra horohorontany mafy
Art + Design. Wit, hatsikana ary WOW